China Yekusimudzira Pinki Pu Chishongo Chishongo Kurongedza Bhokisi nokutengesa uye Fekitori | King Shumba limited
Yekusimudzira Pink Pu Leather Zvishongo Kurongedza Bhokisi
Leather Waini Bhokisi neMidziyo ...
Promotional Pinki Pu Leather ...
Mini Homwe Makeup Mirror F ...
Kirasi yepamusoro 4 “x6̸ ...
Muchena Bright Pu Leather Tis ...
Adjustable iPad Mira, Hwendefa Mira Vabati.
Nguva yekubhadhara: L / C, T / T, Western Union
Pmupunga : USD6
Supply Mano: 100000 pcs / mwedzi
1, saizi :
23 * 15 * 15cmcm kana 9.05 × 5.9 × 5.9inches
2, zvinhu: pu, velvet, zvimwe zvinhu zviripo
l Elegance par kugona. Yakagadzirwa neakanakisa PU dehwe, hunyanzvi mukugadzirwa, toni inonaka, iri bhokisi rakagadzirwa nemaoko rine makamuri akareruka, rakapetwa kunze dhizaini dhizaini yekurembera mhete uye zvishongo, kupenya kwesimbi zvikorekedzo nemabatiro, uye hukuru kugona kubata kunyangwe chishongo chikuru kuunganidzwa, Ratidza kuunganidza kwako mukuyevedza uye dhizaini mune ino isingagumi jewelry kesi. Hupenyu nemaitiro!
l Yakachena yakarongedzwa, yakapfava, yemazuva ano yakagadzirirwa jewelry bhokisi. Kuvaka kwakasimba. Inoyera 9.05 × 5.9 × 5.9inches kana yakavharwa. Rutivi rworudyi rwakaparadzanisa mini zvishongo bhokisi (rinogona kuiswa kuti ufambe kune rako rakakosha zvishongo) rinobata mamwe mhete / maringi / mhete nezvimwe zvishongo - zvakakwana kune chero rwendo!
l Inouya mumhando yepinki PU yeganda kupera. Yakashongedzwa ruoko-yakarongedzwa mune yakajeka mwenje yakafanana velvet. Yakavharwa nekiyi yekudzivirira yako anokosha zvishongo.
k Pamusoro pevharo ine girazi hombe rakavezwa rakavharirwa mukati uye nehomwe hombe yekuchengetedza. Chikamu chepamusoro chine makamuri manomwe. Imwe imba ine gumi velvet yakarongedzwa mhete inoteedzera.
l 2 madhirowa pazasi chikamu, imwe ine matatu compartment, imwe yacho chikamu chizere, chero ipi ingakubatsira iwe kuchengeta ako ese jewelries pamwechete mubhokisi iri rakanaka
4, logo:Deboss, Emboss, silika-skrini uye nevamwe vamwe
5,Packing: chidimbu chimwe nechimwe muhomwe yepoly kana chipo chemabhokisi bhokisi ipapo mune tenzi katoni
Skusvetuka : negungwa kana nendege
Pashure: Yakashongedzwa chena Ruvara Pu Zvishongo Bhokisi
Zvadaro: Yekusimudzira Pu Leather Tarisa Bhokisi Kwemaviri Pcs
Faux Leather Zvishongo Bhokisi
Zvishongo zvekushongedza zvishongo
Leather Zvishongo Bhokisi
Leather Chishongo Chekushongedza Bhokisi
Leather Zvishongo Packaging
Yekusimudzira Pu Leather Tarisa Bhokisi Kwemaviri Pcs
6 Slot PU Leather Tarisa Bhokisi Murongi
Yakashongedzwa chena Ruvara Pu Zvishongo Bhokisi